My Wedding Dream Event Planner | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
My Wedding Dream Event Planner | Hlaing
My Wedding Dream ကတော့ မင်္ဂလာပွဲများနှင့်ပတ်သတ်သော ၀န်ဆောင်မှု့ များကို တစ်နေရာထဲတွင် ရရှိနိုင်အောင် services ပေးသော နေရာဖြစ်ပါသည်။ All in one wedding package များ ၊ ပန်းအလှဆင် ၀န်ဆောင်မှု့ များ နှင့် မင်္ဂလာညစာ စားပွဲများကို လည်း လူကြီးမင်းများ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ Wedding Package များကိုလည်း Installment ( အရစ်ကျ စနစ် ) ဖြင့် ၀ယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ Pre wedding အတွက် indoor နှင့် outdoor package များစွာ ရှိပြီး မိမိသုံးမည့် Budget ဖြင့် ကိုက်ညီသော package များကိုလည်း ရွေးချယ် နိုင်ပါသည်။
မြန်မာ ထိုင်မသိမ်း ၀တ်စုံများနှင့် အနောက်တိုင်း မင်္ဂလာ ၀တ်စုံများကို လည်း ငှား / ရောင်း ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးပါသည်။ မွေးနေ့ ပါတီ package များ ၊ မင်္ဂလာဖိတ်စာ များ နှင့် ပြန်ကမ်း ပစ္စည်း မျိုးစုံ ကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးပါသည်။ အသေးစိတ် သိရှိလိုပါကအောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များ ၊ အီးမေးလ် နှင့် ဖေ့ ဘွတ် page များသို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
My Wedding Dream Event Planner အီးမေးလ်ဖြင့် ဘိုကင်ကြိုလုပ်သည်။
No.37 ( 2B ), Yangon-Insein Road, Butaryone Bus Stop, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား Butaryone Bus Stop မှတ်တိုင် 1 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
My Wedding Dream serves all in one wedding package, floral decoration package and dinner package. Also, they serves installment wedding package and there are variety of indoor and outdoor wedding package and you can choose on your budget package. Traditional and Western Bridal sale and rental services are also available birthday party package, wedding invitation card, wedding gift and other services. If you would like to know more details, please contact to as below phone number and Facebook page.
Massage , Spa, Hair Saloon